Guddoomiya guddiga doorashooyinka oo ku baaqay in dastuurka la bedelo – The Voice of Northeastern Kenya
Guddoomiya guddiga doorashooyinka oo ku baaqay in dastuurka la bedelo
Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka ee IEBC Mr. Wafula Chebukati ayaa soo jeediyay in isbedel lagu sameeyo dastuurka wadanka u degsan.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in tallaabadan ay horseedi karto in doorashada guud ee xilalka hoggaanka la qabto laba maalmood oo kala duwan.
Mr. Chebukati ayaa hoosta ka xariiqay in sarakiisha IEBC ay ku adagtahay inay hal maalin gudaheed maareeyaan doorashada ilaa iyo 6 jago , codadka la dhiibtay ay tiriyaan kadibna soo saaraan natiijo wax ku ool ah.
Waxaa uu hadda ku talinaya in doorashada madaxtinimo , midda baarlamaanka, guddoomiyaasha ismaamulada iyo wakiilada degaanada hoose aynan dhicin hal maalin si howlwadeenada ay u helaan muddo ku filan oo ay waajibaadkooda si habsami leh uga soo bixi karaan.
Mr .Chebukati oo u warramay telefishinka maxaliga ee sida gaarka ah loo leeyahay , Citizen ayaa carrabka ku dhuftay in khalaadkii iyo gaabadkii jiray sannadkii 2017-kii qeyb ka mid ah loo aaneyn karo daal ku yimid sarakiisha saacado badan shaqeynayay.
Guddoomiyaha oo la weydiyay inay xilligii doorashadii guud ee sannadkii 2017-kii ay wax isdabamarino jireen ayaa ka gaabsaday.
Waxaa uunan sido kale faahfaahin ka bixin go’aankii maxkamadda ugu sarreysa dalka ay ku laashay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee 8-dii bishii sideedaad ee sannadkaasi.
Mr. Chebukati ayaa ku nuuxnuuxsaday in guddigu uu wajahayay caqabado dhowr ah balse uu aad ugu dadaalay inuu si hufan u maareeyo codeynta.
Warbixinta dib loogu eegayay doorashadii guud ee 2017-kii ee shalay la soo bandhigay ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 2.9 milyan oo ah diiwaanka codbixiyayaasha khalaad lagu arkay.
Khalaadkaasi waxaa ka mid ahaa taarikhda dhalasho ,jinsiyadda iyo magacyada .
Madaxii hore ee cadaaladda dalka Dr. Willy Mutunga ayaa dhankiisa ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka si loo kordhiyo mudada go’aan looga gaari karo dacwadda ku aaddan natiijada madaxtinimo .
← Xiisadii Siyaasadeed ee Hirshabeele oo Xal laga gaaray.
Madaxweynaha oo kalkaaliyayaasha ku amray inay shaqa joojinta soo afjaraan →